COVID-19 Barnaamijka Caawinta Guriyeynta - Dhexdhexaadinta Bulshada Minnesota
COVID-19 Barnaamijka Caawinta Guriyeynta
Dhexdhexaadinta Bulshada Minnesota waxa ay qabanqaabin doontaa codsiyada kaalmada guryeynta iyo isku xidhka codsadayaasha xarumaha dhexdhexaadinta kuwaas oo ka caawin doona mulkiilayaasha iyo kiraystayaasha in ay isla abuuraan heshiisyo ku saabsan lacagahan.
Codsadayaasha ku doorta dhexdhexaadinta bulshada Minnesota codsiyadooda waxay heli doonaan gargaar dhexdhexaadiyeyaasha. Guud ahaan yoolkeennu waa inaan caawinno 136 guri inay guri ku sii jiraan oo aan sii dhexgelino kaalmada maaliyadeed iyo hababka dhexdhexaadinta si aan u abuurno heshiisyo waara oo horumarsan oo dhexmara mulkiilaha iyo kiraystayaasha.
Waa maxay COVID-19 Housing Assistance Program?
Barnaamijka Caawinta Guriyeynta ee COVID-19 waxa uu bixiyaa lacagaha kaalmada guryeynta si looga caawiyo ka hortagga guri-saarista, ka hortagga guri la'aanta, iyo ilaalinta xasilloonida kiraystaha iyo mulkiilayaasha guriga ee xaqa u leh. Maamulayaasha maxalliga ah ayaa dib u eegi doona codsiyada shakhsiyaadka iyo qoysaska codsanaya kaalmada, xaqiijiyaan u-qalmitaanka, iyo habsocodka lacag-bixinta kharashyada xaqa ah iyagoo ka wakiil ah qoysaska.
Dhexdhexaadinta Bulshada Minnesota waa mid ka mid ah COVID-19 Barnaamijka Kaalmada Guriyeynta maamulayaasha maxalliga ah ee gobolka oo la shaqeeya shakhsiyaadka ku yaal [Your Coverage Area].
Si aad u hesho tafaasiil dhammaystiran oo ku saabsan cidda xaqa u leh inay codsato iyo kharashyada uu barnaamijku daboolayo, booqo www.211unitedway.org. Codsadayaasha daneynaya waxay kaloo wici karaan 211 (Toll Free: 1.800.543.7709; Local: 651.291.0211) ama qoraal "MNRENT" u diraan 898-211 si ay wax badan u bartaan. Khadka caawinta 211 waxa u heellan shaqaale luuqado badan ku hadla oo diyaar u ah inay ka jawaabaan su'aalaha ku saabsan Barnaamijka Caawinta Guryaha ee COVID-19, 8:00 subaxnimo - 8:00 galabnimo Isniinta ilaa Jimcaha.
Xaq ma u leedahay inaad codsato?
Si loogu qalmo kaalmada guriyeynta, qoysaska Minnesota waa inay buuxiyaan dhammaan shuruudaha soo socda:
Dakhliga ka soo gala ama ka hooseeya 300% ee tilmaamaha saboolnimada federaalka, oo ay doorbidayaan kuwa jooga ama ka hooseeya
200% tilmaamaha saboolnimada federaalka.
Hayso kharash aad u qalanto oo la galay ka dib March 1, 2020 kaas oo dhamaaday waqtigii loogu talagalay. Guriyeynta
Miisaaniyada kaalmada waxa kaliya oo loo isticmaali karaa kharashaadka la galay inta u dhaxaysa Maarso 1, 2020 iyo
Diisambar 30, 2020.
Aan awoodin inaad bixiso hal ama ka badan oo lacag ah oo lagu leeyahay sababtoo ah xaaladda degdegga ah ee caafimaadka dadweynaha oo ay sabab u tahay
shaqo la'aan, jirro, ama arrin kale oo la xiriirta COVI D-19.
Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan halkan ku dhufo: COVID-19 Barnaamijka Caawinta Guriyeynta